कर्णाली राजमार्ग : साँंघुरो ट्रयाकमा जबर्जस्ती सवारी चलाउँदा सयौंको ज्यान गयो
ललितबहादुर बुढा, सुर्खेत सोमवार, श्रावण २३, २०७४
आकाशमा जहाज मात्र उडेको देखेका कर्णालीवासीको आँगनमै मोटर गुड्न थालेपछि खुशीको सीमा नै रहेन । १ वैशाख ०६४ मा सुर्खेतबाट गुडेको गाडी कर्णाली राजमार्गहुँदै पहिलो पटक जुम्ला सदरमुकाम खलंगा पुगेको थियो । यो राजमार्गलाई स्थानीयले आफ्नो समृद्धिको ‘भाग्यरेखा’ ठाने । किनकि, वर्षौंको प्रयासपछि राजमार्ग खुलेको थियो । गाउँमै उपभोग्य सामान पाउँदा स्थानीयको जीवनशैली फेरियो पनि ।
तर, कर्णालीवासीका लागि राजमार्गको यात्रा गर्दा तर्सिनुपर्ने अवस्था छ । विस्तार र स्तरोन्नति नहुँदा कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’ नामबाट पनि परिभाषित गर्न थालिएको छ । राजमार्ग सञ्चालनमा आएको एक दशकमै सयौं यात्रुले अकालमै ज्यान गएपछि यो नामाकरण जुरेको हो । बर्सेनि हुने ठूला दुर्घटनाका कारण यो राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने परिवारका सबै सदस्यहरूले एउटै गाडीमा यात्रा गर्न छाडेका छन् । राजमार्गको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो नभएकै कारण अधिकांश यात्रु सकुशल गन्तव्यमा पुग्ने कामना गर्दै देवीदेउता भाकल गर्छन् ।
एक दशक अघि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगत कट्वालले कर्णाली राजमार्गको उद्घाटन गरेका थिए । नेपाली सेनाले खोलेको साँघुरो ट्रयाकमा नै अहिले जबर्जस्ती सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् । राजमार्गको सुधार र स्तरोन्नति नहुँदा बारम्बार सवारी दुर्घटना हुने गरेका हुन् । दुर्घटनापछि सरकारले गठन गरेका विभिन्न छानविन समितिले नै सडकको अवस्था नाजुक भएकाले स्तरोन्नति नहुँदासम्म यात्रुबस सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए । तर, यही सडकमा अहिले पनि जबर्जस्ती गाडी सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कर्णाली राजमार्गमा खेलाँची गरिएकै कारण बर्सेनि ठूला सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । दैलेख खण्डमा यही ३१ जेठमा यात्रुबस भीरबाट खस्यो, जसमा ११ जनाले ज्यान गुमाए । सुर्खेतदेखि जुम्ला जोड्ने राजमार्ग दुई सय ३२ किलोमिटर लामो छ । साना ठूला गरी यो राजमार्गमा अहिलेसम्म एक सय ७० भन्दा बढी दुर्घटना भइसकेका छन् । जसमा दुई सय ३० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार दुर्घटनामा दुई सय ८० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहँदासमेत राजमार्गको विस्तार, मर्मत र स्तरोन्नतिमा राज्यले ध्यान दिएको छैन । यात्रु ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
कर्णाली राजमार्गमा भइरहने, दुर्घटनापछि छानविन टोली गठन हुने र छानविन टोलीले चालकको लापरवाही तथा इन्जिनको खराबीले दुर्घटना भएको भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबाहेक अन्य काम भएका छैनन् । विभिन्न समयमा भएका अध्ययन र अनुसन्धानले समेत यसको अवस्था नाजुक भएको र अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म गाडी चलाउन योग्य नभएको प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत राजमार्ग सुधारमा खेलाँची भइरहेको छ । वर्षात्को समयमा यो राजमार्ग हप्तांैसम्म अवरुद्ध हुन्छ । दर्जन बढी खोलामा अहिले पनि पुल छैनन् ।
१० वर्षको अवधिमा कर्णाली राजमार्गमा साना ठूला गरी एक सय ७० भन्दा बढी दुर्घटना भइसकेका छन्। जसमा दुई सय ३० जनाको ज्यान गएको छ। दुई सय ८० जनाभन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्।
चालकले खोलामा ‘आँखा चिम्लेर’ सवारी हाँक्छन् । बाढी र पहिरोका कारण निर्माण भएको सडक पनि भत्किने गरेको छ । वर्षात्मा भत्किने यही सडक मर्मतमा मात्र हालसम्म १७ करोड रकम खर्च भइसकेको छ । यो राजमार्ग द्वन्द्वका बेला सेनाले निर्माण गरेको थियो । सेनाले खोलेको साँघुरो ट्रयाकलाई हालसम्म पनि थप सुधार, विस्तार र मर्मत नै नगरी जबर्जस्ती सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सामान्यतया सडकको चौडाइ न्यूनतम ६ मिटर हुनुपर्ने भए पनि यो राजमार्गको अधिकांश भागमा तीन मिटर मात्र चौडाइ छ ।
यस राजमार्गमा दुर्घटनापछि गठन भएका छानविन समितिले राजमार्गको स्थलगत अनुगमन गरे । प्रायः सबै समितिले राजमार्गको अवस्था नाजुक भएकाले स्तरोन्नति नहुँदासम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन पनि बुझाए । तर, ती प्रतिवेदन अहिले पनि स्थानीय प्रशासन, विभाग र मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । ०७१ मंसिरमा यो राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेतमा भएको बस दुर्घटनामा २३ जनाको ज्यान गयो । दुर्घटनाको कारण छानविनका लागि भन्दै सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णसिंह खड्का नेतृत्वको समिति गठन गर्‍यो ।
स्थलगत अवलोकनपछि उक्त टोलीले राजमार्गको अवस्था एकदमै नाजुक रहेको प्रतिवेदनसहित दैलेखको राकमभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा सडक सुधार नहुँदासम्म यात्रुबाहक सवारी सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दियो । तर, अहिले पनि त्यही सडकमा जबर्जस्ती गाडी सञ्चालन भइरहेका छन् । परिणाम यात्रुले हत्केलामा ज्यान राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
स्तरोन्नति गर्न माग
साँघुरो ट्रयाकमा जबर्जस्ती गाडी चलाइएको र हालसम्म पनि सुधार नहुँदा आफूहरूले ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कालिकोट रास्कोटका भरतबहादुर शाहीले बताए । उनले आफूहरूको भाग्यसँग जोडिएको राजमार्गको तत्काल स्तरोन्नति गर्न माग गरे । सडक साँघुरो भएकै कारण आफूहरूको यात्रा सुरक्षित नभएको उनको भनाइ छ । जुम्लाबाट दुई दिन लगाएर यात्रुबसमा सुर्खेत पुगेका जुम्ला नराकोटका श्यामलाल रोकायले भने, ‘हचुवाको भरमा सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ, राजमार्ग नाम दिएर के गर्नु ? साँघुरो भएकाले दोहोरो गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन ।’ उनले थपे, ‘यसरी गाडी चलाउनुभन्दा त राजमार्ग नै बन्द गरे हुन्छ । यसरी ज्यानको बाजी थापेर कहिलेसम्म यात्रा गर्ने ? अहिले त परिवारका सदस्यहरू एउटै गाडीमा यात्रा गर्न पनि डर लाग्छ ।’
विगतदेखि नै राजमार्गको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको भए पनि मर्मत तथा सुधारको काम भने हालसम्म हुन सकेको छैन । कर्णाली राजमार्ग बेवास्तामै परेका कारण दुर्घटनाको दर बढेको यातायात व्यवसायीहरू बताउँछन् । काँक्रेविहार यातायात व्यवसायी संघका सचिव रमेश सापकोटाले सडकको अवस्था नाजुक रहेको बताए । भने, ‘सडक साँघुरो र सडक हिलाम्य छन् । खोलामा पुल पनि छैनन्, तत्काल सडकको स्तरोन्नति गर्नु जरुरी छ ।’ राजमार्गको अवस्थामा सुधार भए कर्णालीको मुहार नै फेरिने स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
जोडिँदै हुम्ला र डोल्पा
प्रदेश नम्बर ६ का ८ जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए पनि हुम्ला र डोल्पा भने अहिले पनि सडकको पर्खाइमा छन् । कर्णाली राजमार्गले अहिले कर्णालीका तीन जिल्ला कालिकोट, जुम्ला र मुगुलाई जोडेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणमार्फत् नै हुम्ला र डोल्पामा दुई वर्षभित्र सडक पु¥याउने अठोट गरेको थियो । सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै अहिले यी दुई जिल्लामा सडक पुर्‍याउनका लागि काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालिकोटको खुलालुबाट हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट जोड्ने एक सय ९६ किलोमिटर सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ । यस्तै, डोल्पा सदरमुकाम दुनै जोड्ने जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको एक सय १८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम पनि जारी छ । यी दुवै जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा पनि नेपाली सेनाले लिएको छ ।
कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला सडक निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख कर्णेल इन्द्रवीर गुरुङका अनुसार कालिकोटको खुलालुबाट बाजुराको मध्यभागसम्म ट्रयाक खुलिसकेको छ । अब हुम्लासम्म पु¥याउनका लागि रातदिन काम भइरहेको छ, तोकिएकै समयमा हुम्लामा मोटर पुग्नेछ । उनले आफूहरूले थप क्याम्प विस्तार गरेर तथा हेलिकोप्टरबाट निर्माण सामाग्री ओसारेर भए पनि सडक खन्ने बताए । जिल्ला सदरमुकामसम्म सडकको पहुँच पुगे पनि छिन्चुदेखि जाजरकोट र सुर्खेतदेखि दैलेख जोड्ने सडकमा पनि स्तरोन्नति नहुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।